Notsapainay ny Dodocool DA158, headphone headband mivalona mahery | Avy amin'ny mac aho
Amin'ity herinandro ity izahay dia te-hizara aminareo rehetra ny fitsapana / famerenana natao ho an'ny Fandraisana an-telefaona an-doha DA158 dodocook. Eo amin'ny tsena ankehitriny dia manana safidy maro azo atao isika rehefa te hividy headphone, ka tsara raha tsy maika ny hividy sy hisafidy tsara ny headset.
Azo antoka fa ireo dodocools ireo dia tsy ny tsara indrindra amin'ny kalitaon'ny feo na amin'ny fitaovana fanamboarana aza, saingy ankasitrahan'izy ireo fa avy amina marika iray izay manatanteraka tsara ny volavolan'ny vokariny izy ireo, manana zavatra tena ilaina izy io mba hanana traikefa tsara miaraka amin'izy ireo inona ny fanafoanana ny tabataba.
Ireo dia headphones Wireles Hi-Res Audio vaovao avy amin'ny orinasa ary hanombohana anao dia hamela anao amin'ny sasany amin'ireo tena specs amin'ireto Dodocool ireto:
Audio Hi-Res Wireless (24 bit / 96 kHz)
Diaphragms Bokotra fanafoanana ny tabataba
Fahita matetika: 10 Hz - 45 kHz
mikrô Tafiditra ao anaty ekipa
3.5 mm TRS jack tafiditra ao
Famerenana micro-USB (nampiana anaty boaty)
bateria Lithium-ion mifangaro
Standby manodidina ny 540h araka ny mpanamboatra
Ny mari-pana miasa eo anelanelan'ny -40 / 60ºC
Fiampangana ao anatin'ny 2.5 ora
Fatra sy lanja 185 x 75 x 200 mm - 292g
1 Kitendry, seranana ary mora ampiasaina
2 Fampiarahana amin'ireo dodocools ireo
Kitendry, seranana ary mora ampiasaina
Ny bokotra amin'ireto Dodocool DA158 ireto dia mety sy ilaina amin'ny headphone ary eo amin'ny ilany ankavanana izy rehetra. Manana ny seranan-tsambo havanana izahay amin'ny seranana farany ambany, micro USB sy port 3,5mm jack hampifandray ny tariby amin'ny Mac misy antsika, tariby izay raha ny fanazavana dia tafiditra ao anaty boaty ihany koa. Nampiana koa ny tariby famandrihana micro USB.
Ao amin'ity earphone havanana ity ihany no ahitantsika ny bokotra handingana ny hira sy bokotra hamaliana antso (bokotra telefaona) izay ho ao aorina, LED kely manondro ny pairing ary eo anoloana dia manana ny bokotra mazika isika, ahafahantsika mampihetsika na manafoana ny fanafoanana ny tabataba. Ary amin'ity tranga ity dia manolotra antsika an'ity safidy ity i dodocool amin'ny toe-javatra izay tokony hahafantarantsika ny manodidina antsika.
Etsy ankilany, ny fananana habe lehibe amin'ny ankapobeny dia miteraka dia tena mahazo aina amin'ny fampiasana isan'andro sy mandritra ny ora maro. Manarona ny sofina tanteraka ny écouteur, tsara ny fonosany ary amin'ny fonon-doha dia manana hoditra tahaka isika misy famolavolana lamba ao anatiny izay tena ahazoany aina. Ny fanitsiana ireo headphone ireo dia atao amin'ny alàlan'ny fampiakarana na fampidinana mivantana ny headset ary mahazo aina tokoa izy ireo na dia izany aza angamba zavatra mavesatra raha oharina amin'ny headphones hafa.
Fampiarahana amin'ireo dodocools ireo
Amin'io lafiny io dia tsotra be ny manao ny pairing amin'ny Mac ary ny fizotrany mitovy dia mandeha amin'ny fitaovana rehetra tadiavinay ary misy fifandraisana Bluetooth. Amin'ity tranga ity dia Bluetooth 4.1 izy io fa azontsika atao ihany koa ny mampiasa ny tariby izay ampidirina mba tsy hisintona an'ity fifandraisana tsy misy tariby ity amin'ny solosaina na fitaovana finday misy antsika io seranana io.
Manatanteraka ny fiarahana amin'ny Bluetooth Tsotra be izy io fa zava-dehibe ny hahafantarana ny fomba fiasany:
Tsindrio ary tazominay ny bokotra telefaona (fahazoan-dàlana hofehezina ny lohan-doha alohan'izay) mandra-pihaviny ary hamotsorana
Tsindrio ny bokotra amin'ny telefaona mandritra ny 3-5 segondra indray ary ho hitantsika fa manjelanjelatra ny LED (manga sy mena)
Izahay dia mitady ny headset amin'ny fikirana - Bluetooth ary dia izay
Aorian'ny 10 minitra tsy fampiasana azy ireo dia maty ho azy ireo.
Azo antoka fa ny votoatin'ny vidin-doha amin'ireo headphone ireo dia toa mifanohitra amin'ny kalitaon'ny feo, tena manaitra ny herin'izy ireo sy ny kalitaon'ny feo natolotry ny Hi-Res Audio. Mety ho hafahafa izany, saingy azoko atao ny manamarina fa vitsy ny sofina an-tariby amin'ny sofina amin'ity vidiny ity manana ny kalitaon'ny feo natolotr'ireo sy ny fanafoanana ny tabatabany dia tena mahavariana. Tiako ihany koa ny safidy hananana bokotra manokana hahafahana mampandeha ity fiasa ity.
Tsy misy tokony hatahorana raha mila headphones mahery vaika ianao, miaraka amin'ny kalitaon'ny feo tsara ary tsy mandany vola be amin'izy ireo izahay. Ny marina dia manana dodocool tsara ny katalaogin'ny vokatra audio, Fa ireo headphone vaovao fehikibo ireo no voalohany nanamboatra sy "nametraka ny hena rehetra tamin'ny lohan'omby."
Tsy dia betsaka ny milaza momba ny vidin'ireny dodocool DA158s ireny, ary tena atolotra ho an'ireo mpampiasa izay tsy maniry na tsy mila «headphone» avo lenta fa tsy te hividy zavatra tsotra loatra. Ny vidin'ireto dodocools ireto dia tsy mahatratra 100 euro, mijanona amin'ny 73,99 euro, fa ho an'ireo izay te hividy sasany dia avelanay anao ny kaody fihenam-bidy RV59IGYT izay mampihena azy ireo mandritra ny fotoana voafetra mandra- Tsy misy vokatra..
Somary lanja mavesatra satria vita amin'ny vy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Accessories » Notsapainay ny Dodocool DA158, headphone headband mamoritra mahery